Ungazenza kanjani izingcingo zamahhala zamahhala ezivela kuFirefox | Izindaba zamagajethi
Ungazenza kanjani izingcingo zamahhala zamahhala ezivela kuMozilla Firefox
Umbulali Uviniga | | Software
Maduze nje sizokwazi ukushaya izingcingo zamahhala ngokuphelele sisebenzisa isiphequluli seMozilla kuphela, into ozoyithokozela enguqulweni elandelayo ezokwethulwa ngokusemthethweni kungekudala.
Sikhuluma ngeFirefox 33, ezobeka okunamathiselwe okukhethekile endaweni lapho ama-plugins noma izandiso esizisebenzisa nsuku zonke ukwenza umsebenzi othize zitholakala khona; ngoba lo msebenzi omusha maduze uzokwenza ukuba khona kwawo kwaziwe, Namuhla sifuna ukunilungiselela indlela ukuze nizokwazi ukuthi yini okufanele niyenze, uma nje le nguqulo iphakanyiswa ngokusemthethweni.
1 Izingcingo zevidiyo ezenziwa ngeMozilla Firefox
1.1 1. Ukumema umngani ukuthi ajoyine ikholi yevidiyo
1.2 2. Ukwamukela isimemo sokubamba iqhaza kukholi yevidiyo
Izingcingo zevidiyo ezenziwa ngeMozilla Firefox
Into yokuqala okufanele siyiqonde ukuthi kunezindlela ezimbili ezihlukile zokusebenzisa lo msebenzi omusha; Omunye ubhekisa ngokungenakugwenywa kulowo muntu ozomemela umuntu ohlukile enkulumweni; icala lesibili livela esikhundleni salokho lapho siyizivakashi ezizobamba iqhaza enkulumweni eshiwo. Ngokukodwa kokukhethwa kukho ezimbili kufanele Ukwazi ukukhetha indlela eyiyo yokwazi ukwenza kusebenze lesi sici esisha seFirefox.
1. Ukumema umngani ukuthi ajoyine ikholi yevidiyo
Uma ufuna ukubamba iqhaza kulolu hlelo kanye nephrojekthi entsha iMozilla ekunika yona ngeFirefox 33, sikumema ukuthi ulande inguqulo ye-beta, yize kungcono ukulinda inguqulo ezinzile ukuthi ikhishwe ngokusemthethweni. Noma kunjalo uma ukhuthazile landa inguqulo ye-beta yeFirefox 33, Uma usethule isiphequluli uzothola isithonjana esingeziwe ngaphezulu ngakwesokudla, okungukuthi, endaweni lapho zitholakala khona ngokuvamile zonke lezo zengezo noma izandiso esisebenzisela umsebenzi othile.
Ngokuthatha icala lokuqala esiliphakamisile ngenhla, kuzofanele sikwenze kuphela khetha isithonjana sefoni ukumema umngani ukuthi azoxoxa nathi; Ngaleso sikhathi, kuzovela i-URL, okuzofanele siyikopishele ukuyokwabelana ngayo kamuva nanoma ngubani esifuna ukukhuluma naye, into esingayenza ngomyalezo we-imeyili.
Kungakuhle ukuthi ukusebenzisa lolu hlelo lwezingcingo zevidiyo kukhona uhlobo oluthile lweklayenti noma ukugcwalisa ukusazisa ngokufika komyalezo omusha ukuthumela i-imeyili ku-inbox, into efana kakhulu nokwenzayo Isazisi se-Gmail. Yebo, uma umngani wethu esetholile isixhumanisi esichaziwe futhi wasichofoza, kuzovela iwindi elisha ngasohlangothini lwethu, lapho sizotshelwa ukuthi kukhona "ucingo olungenayo". Lapho sizoba nenketho yokukhetha noma yiziphi izinkinobho ezimbili eziboniswe efasiteleni, ezizosisiza ukuthi senqabe ucingo (inkinobho ebomvu) noma siluphendule (inkinobho eluhlaza).
Izinketho ezimbalwa ezingeziwe zizovela kubha yezinketho zesiphequluli seFirefox 33, esizosisiza ukuthulisa imakrofoni noma ikhamera, futhi kukhona nethuba lokuyilengisa ukuze uyiqede ngaleso sikhathi.
2. Ukwamukela isimemo sokubamba iqhaza kukholi yevidiyo
Icala lesibili ebesiliphakamisile kwasekuqaleni yileli, okungukuthi, simenyiwe ukuthi sihlanganyele ocingweni lwevidiyo ngesixhumanisi, esizolithola nge-imeyili. Lapho sichofoza kuleso sixhumanisi kuzovela iwindi elincane elizophakamisa ukuthi «qala ikholi yevidiyo noma ingxoxo yezwi ».
Izithonjana ezingeziwe esiziphakamisile ngenhla zizophinda zivele ngalesi sikhathi, okungukuthi, sizokwazi futhi i-webcam eyisimungulu, imakrofoni noma umane uvale ucingo uma luphelile.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi kuyo yonke inqubo yokuqala yokumisa, iFirefox 33 izosicela imvume yokwenza kusebenze futhi sisebenzise izinsiza ezithile kukhompyutha yethu, okusho ukuthi isiphequluli sizoba namalungelo wokusebenzisa i-webcam kanye nemakrofoni. Ukuze abantu ababili bakwazi ukubamba iqhaza kukholi yevidiyo, kuyadingeka ukuthi bobabili babe nohlobo olufanayo lwalesi siphequluli se-Intanethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungazenza kanjani izingcingo zamahhala zamahhala ezivela kuMozilla Firefox
I-Apple yethula ngokusemthethweni i-iPhone 6